Ny vavaka dia manohitra ny zana-tsipìkan'ny aretina | TOKO VAVAKA
Home vavaka Ny vavaka dia manondro ny zana-tsipìkan'ny aretina
Ny vavaka dia manondro ny zana-tsipìkan'ny aretina
Androany isika dia hiatrika teboka am-bavaka mifanohitra amin'ny zana-tsofin'ny aretina. Notarihin'ny fanahin'Andriamanitra isika hanangana alitara fivavahana hanoherana ny zana-tsipìkan'ny aretina; Andriamanitra dia efa handefa zana-tsipìka hiverina amin'ilay naniraka azy ary hanafaka ny olony. Ny fahavalo dia tsy manana drafitra hafa afa-tsy ny mampijaly olona izay nanapa-kevitra ny hanaraka an'i Jesosy. Tsy hoe nanao zavatra nahatsiravina izy ireo, ny hany helok'izy ireo dia ny fanekena an'i Kristy ho Tompony sy mpamonjy azy manokana. Ary koa, ho an'ireo olona manana potika lehibe hanjary lehibe eo amin'ny fiainana, imbetsaka, ny fahavalo dia afaka manakana azy ireo amin'ny alàlan'ny fitifirana zana-tsipìka marary amin'ny fiainany.
Matory ny trano Hale ary mahasalama ny olona, ​​ary rehefa mifoha amin'ny torimaso izy ireo dia voan'ny aretina mahatsiravina. Aretina izay tsy hain'ny orthopedic, manazava fa nanao izany ny fahavalo. Sombim-baovao tsara ho anao rehetra izayvesaran'ny zana-tsipika mahatsiravina, ny fanahin'ny Tompo, ny fanahin'ny fahalalahana dia hivoaka hanafaka anao. Ny zana-tsipìka dia hesorina amin'ny vatanao, ary hiverina any amin'ilay naniraka azy inefatra amin'ny anaran'i Jesosy.
Zava-dehibe ny fahalalana fa ny fahavalo dia tsy manana fandaharam-potoana hafa afa-tsy ny miteraka fahasimbana, ary ny iray amin'ireo fomba hanaovana izany dia ny fandefasana zana-tsipìka marary amin'ny ain'ny olona iray. Tao amin'ny soratra masina dia niaina izany i Joba fa Andriamanitra kosa nitety azy namonjy azy. Ilay Andriamanitra nanasitrana an'i Joba, fa mbola miasa Andriamanitra, dia hanao fahagagana amin'ny fiainanao Izy. Tsy hahita toerana ao amin'ny vatanao io zana-tsipika demonia io. Haverina amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy ilay naniraka azy. Ny soratra masina dia milaza fa ny vatantsika dia tempolin'ilay Andriamanitra velona, ​​aza avela hanimba azy ny ratsy, fa avelao io zana-tsipika io amin'ny vatanao anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy aho, ny zana-tsipìkan'ny aretina rehetra izay notifirin'ny fahavalo tamiko dia tokony ho may dieny izao. Ny ota sy ny faharatsiana rehetra amin'ny fiainako izay nahatonga ahy ho rembin'ny fahavalo izay nampijaly ny fiainako tamin'ny aretina mahatsiravina, mivavaka aho fa amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia hamela ahy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Ny soratra masina dia milaza fa tsy misy fitaovam-piadiana namboarina hamely ahy. Ny zana-tsipìkan'ny aretina rehetra ato amiko dia manomboka maty ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba hanary ny herin'izy ireo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy ny zana-tsipika toy izany.
Ny zana-tsipìkan'ny demonia rehetra izay voatifitra tamiko hanohinako ny fahasalamako, dia nandidy aho tamin'ny alàlan'ny afon'ny Fanahy Masina fa tokony hiverina any amin'ilay nandefa tamin'ny vala fito tamin'ny anaran'i Jesosy izy ireo. Fa mitondra ny marik'i Kristy aho, aza avela hisy hanelingelina ahy, manome didy amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy aho, na iza na iza te hanakorontana ahy amin'ny olana ara-pahasalamana, mivavaka aho mba hirehitra amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny soratra masina milaza fa izy dia maratra noho ny fahadisoantsika; notorotoroina Izy noho ny helontsika; teo aminy no nisy ny famaizana nahatonga antsika hihavana, ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Manambara ny fanasitranana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ny zana-tsipìka rehetra izay niteraka aretina tamin'ny fiainako dia manapa-kevitra aho fa ny fanasitranan'Andriamanitra dia tonga amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny endrika fanaintainako rehetra amin'ny vatako dia manapa-kevitra aho fa hanjavona amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ry zana-tsipika fanaintainana rehetra eo amin'ny fiainako, henoy ny feon'ny Tompo, fa voasoratra fa ny hazo rehetra izay tsy nambolen-draiko dia hongotana hiala amin'ilay fotony. Mandidy aho fa ny zana-tsipìka rehetra amin'ny fiainako dia maty ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fanahin'ny aretina rehetra voatendry amin'ny fiainako dia voasambotry ny herin'ny Fanahy Masina ianao. Ianareo devoly marary rehetra izay nifikitra tamin'ny fiainako, dia nosamboriko androany tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fanafihana aretina sy aretina mahatsiravina rehetra amin'ny fiainako izay mandrahona ny aiko, dia mananatra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Fa voasoratra fa raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao aminao, dia hamelona ny vatan-tenanao mety maty amin'ny Fanahin'ilay mitoetra ao aminao. Mandidy ny fidiran'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainako aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Miantso ny Fanahy Masin'Andriamanitra aho ho avy hanao fanadiovana ny tontolo iainana amin'ny fiainako, ary hofoanana amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina ratsy rehetra sy ny aretina hafahafa. Manome didy aho Andriamanitra fa ho hitanao ny fahoriako sy ny fahoriako ary ho voatosika ianao hamaly faty ny fahavalo izay nanao izany tamin'ny anarana Jesosy.
Ny aretina na aretina rehetra mampiavaka ny fianakaviako dia mivavaka aho mba ho faty amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ny aretina na ny kilema rehetra izay manafika ny olona ao amin'ny fianakaviako dia manapa-kevitra aho fa ho very ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy ny amiko. Fa izaho mitondra ny marik'i Kristy, aza avela hanelingelina ahy ny aretina firazanana. Manome didy amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy aho, ny aretina rehetra amin'ny razana izay manelingelina ny olona amin'ny fiainako, manapa-kevitra aho fa afaka amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Hoy ny soratra masina, raha mitaraina aminao aho, dia miamboho ny fahavaloko: izao no fantatro; fa momba ahy Andriamanitra. Tompoko, mivavaka aho mba hamindranao fo amin'ny ranomasoko fanaintainana. Mivavaka aho mba hananaranao ny fahavalo noho ny amiko. Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba hitsanganao amin'ny famalianao ary handringana ny fahavaloko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandidy aho fa na ny zana-tsipìka na ny tanana ao ambadiky ny zana-tsipìka dia tokony hirehitra amin'ny anaran'i Jesosy.
Arrow of aretina
vavaka fanoherana ny zana-tsipìkan'ny aretina
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny lozam-pifamoivoizana
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanafihana
Vavaky ny ady sy ny soratra